गुराँस लाइफको हकप्रद निष्कासन ..? - Aathikbazarnews.com गुराँस लाइफको हकप्रद निष्कासन ..? -
automatic thesis statement writer write my medical school personal statement primary homework help co uk rainforest mfa creative writing programs acceptance rates python homework assignment help creative writing masters uk creative writing workshops washington dc creative writing essays on love how many words foracreative writing how to earn money through creative writing do my homework website ib extended essay help creative writing in bay area creative writing portfolio requirements creative writing about hell creative writing sqa how does critical thinking help in college how doesabusiness plan help entrepreneurs best affordable essay writing services i do my homework all by (himself herself myself) homework help eagan creative writing jobs seattle wa ual creative writing short course which best describes the thesis statement inascholarly written paper quizlet ramsey county library homework help creative writing warrington essay on order of operations best writing service review creative writing stories about bullying pay for thesis writing
गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सले शतप्रतिशत हकप्रद शेयर असार १४ गतेदेखि निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले यस अघि स्थगित हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने भएको हो । यस अघि कम्पनीले चैत २० गतेदेखि उक्त हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरेको थियो ।
लकडाउनका कारण विक्री खुला गर्न नसकेको कम्पनीले असार १ गतेदेखि अवस्था केहि सहज भएकाले विक्री खुला गर्ने तयारी गरेको हो । कम्पनीले प्रतिशेयर १०० रुपैयाँ अंकित दरका ९३ लाख ८५ हजार २०० कित्ता हकप्रद शेयर साउन ४ गतेसम्म विक्री गर्न लागेको हो । यस हकप्रदमा फागुन २१ गतेसम्म कायम शेयरधनीहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले हकप्रद शेयर प्रयोजनका लागि फागुन २२ गते बुक क्लोज गरेको थियो ।
कम्पनीले हाल कायम चुक्तापूँजीको ९३ करोड ८५ लाख २० हजार रुपैयाँको आधारमा शतप्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्न लागेको हो । हकप्रद पश्चात कम्पनीको चुक्तापूँजी १ अर्ब ८७ करोड ७० लाख ४० हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । बीमा समितिले तोेके बमोजिम २ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी हकप्रद पश्चात पनि कायम नहुने भएको छ ।कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को मुनाफाबाट चुक्तापूँजी ९३ करोड ८५ लाख २० हजार रुपैयाँकै आधारमा १३ दशमलव १० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्ताव पारितका लागि कम्पनीले हालसम्म वार्षिक साधारण सभाको मिति तय गरेको छैन् । प्रस्तावित बोनस पश्चात भने कम्पनीको चुक्तापूँजी तोके बमोजिम २ अर्ब रुपैयाँ कायम हुनेछ ।